Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - blackjack77somalia.com
Ugu Weyn Ee	/ Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Marka la eego oo dhan si aad u gaarka ah, waxaan u baahan tahay macluumaad jirin shakhsi marka aad booqanaya blackjack77somalia.com. Si kastaba ha ahaatee, haddii koorsada of labada baaritaan wax soo saarka la xiriira ama koorsada macaamilka ah on Site ah macluumaadka aad bixiso waxaa ilaalinaya ka haysani oo waxaa laguu sheegi doonaa sida macluumaadka loo isticmaali doono. War saxaafadeedka ayaa lagu hoos ku sharxayaa dhaqanka macluumaad ku saabsan Site ah.
Qoraalka wuxuu daboolayaa dhammaan meelaha blackjack77somalia.com yaal blackjack77somalia.com (Site). Macluumaadka in la helo sida ay dhaqanka macluumaad collection of Site waa macluumaadka lagu siiyey shakhsiyaad si ay blackjack77somalia.com, taas oo ka baxsan waa ganacsiga, ganacsiga ama xirfad ah oo ay shakhsiyaad ah (Information).
Macluumaadka aan (blackjack77somalia.com) ururin ku dhici karaa laba qaybood:
The macluumaad Tracking, ururiyay markii sahmiyo user iyada oo loo marayo Site ah.
Macluumaadka shakhsiga ah waxaa bixiya users on iskood ah ku salaysan.
macluumaad raad la ururiyo by Site si toos ah iyo si nidaamsan. Macluumaadka waxaa loo ururiyaa si aad u eegto hawlaha goobaha, bogagga soo booqday, waqtiga on Site iyo goobaha ay martida ahaayeen hyperlinked ka.
ururiyo Site raad macluumaad ku salaysan si qarsoodi ah. Site ma wadaajin Information kasta Personal macluumaadka this.
Socodka Macluumaadka waxaa loo ururiyaa by ah Guda server web iyo cookies. server Web abuse xogta Collect on waxqabad ee web site ka. cookie A waa jagadii macluumaadka loo isticmaalo raad, authenticating iyo dayactirka macluumaad gaar ah oo ku saabsan dadka isticmaala Site ah (doorbidida site iwm). blackjack77somalia.com raad booqasho ku celiyaan in Site iyadoo la kaashanayo of cookies. kombiyuutarada Visitor ee loo qoondeeyay cookies, oo aan ururinta wixii macluumaad shakhsi ah oo ku saabsan user ee computer ah, haddii aan si gaar ah la siiyo by user isaga qudhiisa on iskood ah ku salaysan.
Socodka Macluumaadka waxaa loo isticmaalaa si loo hagaajiyo design Site iyo content by falanqeeyo tirakoobka ee booqashooyinka.
By Information Personal aan tusinayaan user cinwaanka magaca, e-mail iyo sidoo kale macluumaad dheeraad ah oo aan waajib ee. Macluumaadka shakhsiga lagu soo ururin karaa bogagga Site qaar ka mid ah haddii booqdaha dooni inuu su'aal weydiin blackjack77somalia.com online, markii degsado software, ama gelinayn amar Times.
Intaa waxaa dheer, Information Personal la soo ururin karin sida qayb ka mid ah codsiga tartanka a.
Macluumaadka shakhsiga ah waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin horumarinta, maamul, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xaqiijinta iyo wargelinta ah ee ku guuleysatay.
Isticmaalka of Information
Information The siiyo Site loo isticmaalo bixinta users la adeegyo cusub blackjack77somalia.com iyo / ama dallacsiinta in aan tixgelin doonna xiiso in user ka. Information The la wadaagi karto shaqaalaha, wakiilada, madax bannaan ee qandaraas ama gudahood kale blackjack77somalia.com la xiriira / hay'adaha aan la xidhiidhin iyo / ama ganacsatada, kuwaas oo matalaya Site ah iyada oo leh muuqaal fulinta iyo / ama maraakiibta amar, dhimis ama abaalmarinta . macluumaad shakhsiyeed oo waa inaan la wadaago aan blackjack77somalia.com goobood, haddii loo arko lagama maarmaan ah sida marka aad dhammaysato macaamilka. blackjack77somalia.com heysta masuul kama aha siyaasadaha gaarka ah ee meelaha kale, oo waxay ku xiran si ay heshiiska si loo daaweeyo macluumaadka shakhsiga ah sida warbixin ganacsi sir ah oo garashadana in waxaana laga yaabaa in aan la isticmaali karaa ujeeddooyin kale oo aan ka ahayn in uu fuliyo ay gaar caleemaha iyo shaqada tooska ah.
Cinwaanada soo laabtay e-mail User waxaa loo isticmaalaa in lagu jawaabo e-mails iyo su'aalaha aan helno sidoo kale si ay u bixiyaan updates adeegyada, oo uu ku wargelin ku saabsan dallacsiinta dheeraad ah iyo dalabyo u diri.
Xogta Shakhsi laga yaabaa in lagu shaaca ka qaaday marka loo baahdo in ay u hoggaansamaan sharciga, ama aan iimaanka wanaagsan buu heli tallaabada lagama maarmaanka ah, i.e. si ay u xoojiyaan ama u dalban Shuruudaha iyo Xaaladaha, si loo ilaaliyo xuquuqda, ammaanka ama hantida blackjack77somalia.com.
blackjack77somalia.com meesha kama saarayso suurogalka ah ee gadashada / iibinta hantida our / shirkadaha kale ee koorsada of time. The xawaalad macluumaadka shakhsiga ah martida view nooca ah 'sida hanti ganacsi oo kaliya ah. Intaa waxaa dheer, warbixin ayaa loo gudbin karaa in ay dhacdo ama marka blackjack77somalia.com ama dhammaan hantida ay ka iibsadeen ama ku xiran badanoo ku kacday.
Aadka hannaankooda ammaan xirfadeed waxaa loo isticmaalaa si looga hortago in ay helaan sharci darro ah, si ay u ilaaliyaan sax xogta iyo dammaanad isticmaalka saxda ah ee macluumaadka. nidaamyada loo isticmaalo at this site raacaan heerarka ammaanka ugu dambeeyay oo ka mid ah hannaanka loo baahan yahay elektaroonik ah, jirka, iyo maareynta, oo caawimo si ay u ilaaliyaan macluumaadka la soo ururiyey online iyo si ay u hubiyaan iyo dammaanad isticmaalkeeda saxda ah.
Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u tahay xaqiiqada ah in xogta ma noqon kartaa gebi ahaanba bilaash ah oo ku saabsan internetka, aan hubo in macluumaad kasta gudbiyey na in la gabi ahaanba ka aamin doonaa oo ammaan ah ma sheegi karo. Users siiyaan macluumaad ah ee halista u gaar ah. blackjack77somalia.com si joogto ah qiimeeyaa iyo qiimeeyaa kartida tiknolojiyada cusub ee la siinayo ilaalinta oo dheeraad ah macluumaadka.
Helitaanka macluumaadka shakhsiga
Macluumaadka shakhsiga ah ayaa la siiyaa noo waa inaan la isticmaalo ama la wadaago haddii aan si kale lagu bixiyaa Statement soo socda. Haddii aad mar dambe ma doonayo in warbixin laga blackjack77somalia.com hesho, fadlan riix halkan si aad Unsubscribe.
Xaqa aad u leedahay Qoraalka Qarsoodiga Change
blackjack77somalia.com heysta oo xaq u leh inay dib u saxid Statement waqti kasta. Isbedelada ahaan xaq u wax ku ool ah ku dul dhajinta on Site ah. Last Updated on February 24, 2009. Waxaa jiray No isbeddelllada dhigay inay maal ee Statement this.